IsiNgesi sababaleki, ii-asylees, i-SIV, kunye namaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni - iZiko lezeLwimi eziBini
IsiNgesi sababaleki, ii-asylees, i-SIV, kunye namaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni
Malunga ne-RSS yeSebe le-RSS
Iiklasi ezingabizi ndleko zabaFundi abafanelekayo
Inkxaso yoLwimi (iSpanish, isiArabhu, isiFrentshi, isiFarsi, isiPanish, isiSwahili, iTurkey)
Iinkonzo zenkxaso ezikhoyo
Inkxaso yokudlulisela kumaqabane ethu
Ukuthatha inxaxheba kwabahlali kwiCandelo leembacu
Iziko lemfundo yeeLwimi ezimbini (i-BEI) sele lineminyaka engama-40 linceda abafundi abaziimbacu nabasuka kwamanye amazwe. Ebudeni beminyaka engamashumi amathathu edlulileyo, iBEI ibonelele ngeeklasi ze-ESL kumawaka abantu abatsha abasuka kwamanye amazwe, iimbacu, amaxhoba, amaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, kunye neendwendwe ezisuka phesheya ezimele onke amanqanaba ezentlalo, ezemfundo, ezobuhlanga kunye nezoqoqosho. I-BEI ibonelela ngemfundo esemgangathweni kubafundi bethu, ibakhuthaza ukuba baphumelele kwizifundiswa, kushishino, nakuluntu lwehlabathi nolwasekhaya. Impumelelo kwezi nkalo ixhobisa abafundi bethu ekufundeni ulwimi kwaye ibenze babonise ukuhambela phambili kubuchule babo bolwimi. I-BEI inamava ekufundiseni isiNgesi kwiinkalo ezahlukeneyo: i-Basic Literacy, i-ESL, iNkqubo yesiNgesi enzulu, i-Job Readiness, kunye ne-Workplace ESL kuquka kodwa ingaphelelanga kukhuseleko kunye nezifundo ezinxulumene nomsebenzi wokuthetha kunye nesigama. Iiklasi zethu ezinxulumene nomsebenzi zisebenze neendidi ezininzi ezahlukeneyo zemizi-mveliso: inkonzo yokutya, iiresityu, neehotele, ukuvelisa, ukufudumeza nokupholisa izinto zokupholisa. I-BEI yinxalenye ye-Houston Refugee Consortium yababoneleli ngenkonzo yeembacu abebesebenza ngokubambisana kule minyaka ili-15 idlulileyo. I-Consortium yee-arhente iqabane labelana ngenkxaso-mali yeSizwe efana ne-RSS, i-TAG, kunye ne-TAD kumzamo wokubonelela ngeenkonzo ezisebenzayo nezipheleleyo kwiimbacu ezibuyiselwe e-Houston. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, i-BEI ibiyeyona khontraktha ephambili kuzo zonke iiNkqubo zeeNkonzo zeMfundo zeRSS kwaye inamava abanzi kuqeqesho, ukubonisana, nokubeka iliso kuthotyelo lwenkqubo nolwemali ukuqinisekisa iziphumo eziyimpumelelo zeenkqubo zentsebenziswano.
Ngowe-1988, iBEI yayisesinye sezikolo ezimbalwa zabucala eTexas ezigunyaziswe yi-US Immigration and Naturalization Service ukuba zifundise isiNgesi neCivics kubaphambukeli abasandul’ ukuvunyelwa ngokusemthethweni nabafumene uxolelo kummandla waseHouston. Kwi-1991, i-BEI yaba yi-consortium subcontractor kunye ne-Houston Community College System ibonelela nge-ESL (amanqanaba 1, 2 & 3) exhaswa ngemali nguMthetho woLwazi lokuFunda nokuBhala weSizwe (NLA) we-1991, PL 102-73. Ngo-1992, i-BEI yawongwa ngenkxaso-mali yokufikelela ebantwini liPhulo leRhuluneli elichasene noCalucalulo lwezeNgqesho, apho i-BEI yafumana iwonga elincomekayo kwiRhuluneli ngeenkonzo ezibonelelwayo. Ukususela ngowe-1995 ukuya kowe-1997, iBEI ibonelele ngabafundi, uninzi lwabo olwaluziimbacu, Uqeqesho loLawulo lweOfisi yeeLwimi ezimbini. Inkqubo yaxhaswa ngemali yi-JTPA Isihloko II-A, II-C/ Houston Works. Ngo-1996, i-BEI yafumana inkxaso-mali ye-Texas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) evela kwi-TDHS, i-Ofisi yoMfuduko kunye neMicimbi yeeMbacu. I-BEI ibikhonza iimfuno zemfundo yabemi beembacu eHarris County ukususela ngo-1991, nge-RSS, TAG, kunye nezibonelelo ze-TAD ezivela kwi-TDHS, namhlanje yaziwa ngokuba yi-HHSC.
© Ilungelo lokushicilela 2022 iZiko leMfundo leelwimi ezimbini